Siyaya Emhlangeni Event - Amajuba District Municipality
Siyaya Emhlangeni Event
Amatshitshi aseMajuba ayophakamisa igama leSifunda eMkhosini woMhlanga
Izintombi nto eziqhamuka kuyo yonke imiKhandlu engaphansi koMkhandlu weSifunda Amajuba zibe yingxenye yomcimbi wokuhlelela uMkhosi woMhlanga obanjwa minyaka yonke eSigodlweni saseNyokeni kwaNongoma. Kulo nyaka lendumezulu yomcimbi oyingxenye yosikompilo lwesizwe samaZulu uzobe ungomhla ka-6 kuya ku-8 September 2019.
UMkhosi woMhlanga usuneminyaka waqalwa kanti kuthe eminyakeni embalwa Isilo uNgangezwe lakhe sawuvuselela njengenye yezindlela zokugqugquzela ukuziphatha nokuvikela amantombazane ukuthi engayi ocansini isikhathi.
ImiKhandlu yonke iba nohlelo lukaSiyaya Emhlangeni lapho izintombi nto zisuke zizihlela ukuthi zizofike zilandele luphi uhlelo nohlobo lomculo ezizowenza. Abaholi basebenzisa lo mcimbi ukuyala izintombi ngendlela yokuziphatha nendlela yokuziphatha eMkhosini woMhlanga. Umcimbi kaSiyaya Emhlangeni waseMajuba ububanjelwe eDannhauser Sports Complex ngomhla ka-24 August 2019.
Lo mcimbi ubuhanjelwe amakhansela, abaholi bomdabu kanye nomama abahola uhlelo lokuhlolwa kwezintombi. Kulo mcimbi bekuhlangene izintombi ezingaphezu kwezi-2000 ezizobe zisuka kulesi Sifunda zilibangise kwaNongoma.